Hlaziya umgomo wobuchwepheshe obuhle be-earphone, wazi kangakanani
Ubuchwepheshe obunobuhlakani, obukude kakhulu kithi, bungabonakala kuphela kubakhiqizi bezindaba eziqanjiwe zesayensi, manje singabhekana kalula nobuchwepheshe obuhlakaniphile, sidinga nje i-earphone encane ehlakaniphile, ungabona iphupho lomoya opholile ngokuzenzakalela, ukhanyisa ngokuzenzakalela uvaliwe, nje njengokuthi ...
Yiziphi izinzuzo eziyisithupha eziphezulu zokugqoka ihedsethi ye-Bluetooth
1. Ukuhlangana Nomsizi Teleconferencing kuvame kakhulu emsebenzini wanamuhla nasempilweni yanamuhla. Uma kufanele ubambe ifoni ihora elilodwa endaweni ekude, intamo yakho nezingalo zakho kuzoba buhlungu kakhulu. Ngikholwa ukuthi abafundi ababhekane nalolu hlobo lobuhlungu nokuhlupheka bazofuna ukuthola i-Bluetooth headse ...
Ukugcinwa kwansuku zonke kwama-earphone
Amahedfoni adlala indima ebalulekile empilweni yansuku zonke, ukuhamba emgwaqeni kungabona abantu abaningi behamba, bazogqoka ama-headphone ukujabulela umculo. Ihedsethi yokuqapha ibaluleke kakhulu ekurekhodweni nasemidlalweni efanele ngenxa yezwi layo lomuntu elivelele. Kepha uma ukugcinwa okungalungile nokusetshenziswa kuzolimaza ...
Amahedfoni ethu yinkampani ehlanganisa imboni futhi ihwebe ngamahedfoni we-neckband
Ake siqale ngokwethulwa kwamahedfoni. Amahedfoni ethu yinkampani ehlanganisa imboni futhi ihwebe ngamahedfoni we-neckband. Ngikholwa ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi izitayela zamahedsethi emakethe zakhiwe ngamahedsethi anezintambo ama-tws namahedisethi angenantambo, kepha ngikholwa ukuthi kungenzeka awazi ...
Izici zokusebenza kwe-ks-017
1. Izici zokusebenza kwe-ks-017 Izosekela umqondo womklamo wobuntu, ubulula nemfashini yamahedisethi. Okuhlaza kufana nokuvikelwa kwemvelo nokongiwa, kanti i-017 yethu izichaza kahle lezi zimilo ...